#GuyyaattiiSana Gaafa June30GGAO tti. Maaltu #Jawar Mohammed faa mudate? – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#GuyyaattiiSana Gaafa June30GGAO tti. Maaltu #Jawar Mohammed faa mudate?
#GuyyaattiiSana Gaafa June30GGAO tti. Maaltu #Jawar Mohammed faa mudate?
Maaltu #JawarMohammed faa mudate?
Erga nuti Gidduu Gala Aadaa Oromoo geenyee tilmaamaan daqiiqaa 5-10 booda Taakkalaa Uumaa eegdota isaatiin ajjabamee bakka nuti jiru GGAOti dhufe. Akkuma dhufeen, Baqqalaa fi Jawaar dabareedhaan dubbisee xiqqoo erga dhaabbatee booda, Jawar fi Baqqalaa harka qabatee fageenya Meetira 30 hin caalletti achi nurraa siquun haasaa eegalan.
Erga haasa’nii xumuraniis gara keenyatti dhufuun, “Reeffi Hacaaluu Finfinneetti awwaalamuu baatus, Sirni geggeessaa guddaan, geggeessaan gootaa Finfinnee irraa gara Ambootti akka taasifamuuf waliif gallee jirra. Kanaaf hangasitti Reeffi akka foolii hin godhanneef, Firiijii reeffi keessa taa’u Taakkaleen deemee fidee dhufa. Nus ammoo asumatti eegna.” Jechuun kan dubbate Jawaar ture. Taakkalaanis kanarratti waliif galuu irra deebiin nutti himee, konkolaataa isaa seenuun GGAO sanaa keessa bahee deeme.
“Takkala uuma kantiibaan magaalaa Finfinnee duraani akka gad bahaniin rippaabiliikaan gaardiin hiriira galanii dhufan. Eegdotni Rippaabilikaa Abiy Jawaarfaatti marsanii, meeshaa nyaachifachaa yeroo itti turan ture. Akka yaada keenyaatti, Jawaar inuma ajjeefama, akkaataan jaras ammoo waanuma nu ajjeesuuf dhufan fakkaata ture.
Dabalataan warri Eegdota Rippaabilikaa Abiy meeshaa ittiin qabatanii jiran nama waraanaaf dhufe fakkaatu ture. Hundi isaanii isnayparii fayyadamu akkuma dhufaniin reefka Haacaaluu fuune deemna jedhan achii fudhanii deeman Takalen firiijii keessa keenya waan jedheef. Gaafa nutis bahuuf kaanu numarsan Isaan keessaa ajajaan Eegdota Rippaabilikaa tokko nama barbaadnu qabna jedhe.
Eegduun jawaaris eenyu barbaadu? Maalif barbaadu? Eenyutu barbaade namni as jiru kun VIP dha Abbaan barbaadu isa haa qunnamuu ofii keenyaaf bira deemna jedhen. Namichis garas deemee telegraama ykn meeshaa wal qunamsiistu waraanatiin ajajaa fudhate baqaa deemu ni dandeesan nun jedhe haa ta’u malee miseensi rippaabiliikaan gaardiin fokkotan nama hin fakkaanne tokko karaa bitaa konkolaataa Jawaar jiruu goree qawwee isaa nyaachifate.
Yeroo kana, nuti naasuu hamaa keessa turre. Nu qofa miti; poolisoonni Oromiyaa nu marsanii turan illeen akka malee rifatanii fii gubataniis turan.
Osoo kun kanaan jiruu bahuu dandeessu deema nun jedhe achiin Eegduun jawaa Nutoo suuta baana issin nu dursaa jedhen gaafa bahuuf ka’an humni waraana baay’een kan nuti hin arkiin gara balbala GGAO Stadiyoomiin as bahe hundu wal qabatanii gara waajiraa badhaadhina Oromiyaatiin akka nama bahu deeman. Haalli isaanii namatti hin tolu dhukaasa nuti banuu danda’u ture.
Eegdonni Jawaaris kana shakkanii battaluma Jawaariin Konkolaataa keessaa baasanii Konkolaataa biraatti dabarsan. Marsaa lammaffaaf Rippaabiliikaan gardii fi humni addaa polisii Oromiyaa waliin tahuun as deebi’an yeroo kana kan commander IBRAHIM fi KAN BIRO TOKKO waliin dhufan isaan keessa tokko ifaan ifatti jawaar barbaanna jedhee Eegduu Jawaaritti hime.
Yoo kana Eegduun Jawaar sunis, ‘Jawaar haasofsiisuu yoo barbaaddan asuma konkolaataa isaa keessatti dubbisaa’ jechuun deebii laateefi ture. Ergasii Jawaar foddaa Konkolaataa banee Ajajaa sana gara ofiitti waame. Ajajaan sunis konkolaataa Jawaar keessaa seenuun Jawaar bira taa’ee haasaa eegalan. Kana gidduutti, Jawaar eegdotasaa keessaa tokko ofitti waame, “meeshaa hiikkadhaa!” Jedhen Sababni inni kan inni kana godheef RISK MANAGE gochuufi.
Eegdoonni Jawaaris aariidhaam ciniinnachaa hamileen isaanii osoo cabuu mataa gad qabachaa meeshaa hunda hiikkachuu eegalan. Hundi keenyas sakkata’aamnee dhaabbachuu eegalle.
Waca uumame keessaa sagaleen Dubartii tokko guddatee dhaga’amaa ture. Sagaleen sunis Poolisoota Oromiyaaf kan waamicha godhu ture. “Yaa poolisoota Oromiyaa, Jawaarifi Baqqalaa ajjeesuuf jedhu. Adaraa keessan seenaa Muusxafaa Huseen hin dagatinaa. Utuu ilaalluu ija keenya dhabuuf deemna” kan jedhu ture. Kanaaf kana gidduutti, poolisoota na fuuldura dhaabbatan keessaa Tokko uffataa fii meeshaa waraana ofirraa baasee darbee, booyaa deddeemuu eegale.
Osoo polisiin kun uffata waraanaa of irraa baasee booyaa gara galmaa ol hin seenin dura security yookaan eegdonni jawaar Mohammed akka meshaa hiikatan taasifamee ture.
Hundi keenya miira abdii kutannatiin hamileen nu cabee wanta adeemsifama jiru dhaabanne laaluuf dirqamne osoo haala akkana keessa jiru jawaar, baqqalaa fi Hamzaa konkolaataa tokko keessa galchan yeroo kana kan maraanne missensi polisii tokkos uffata ofiraa baase achii gaafa konkolaataan Jawaar Baqqalaa fi hamzaa keessa jiran motari kaafame yeroo deeman within a minute dhukaasni rasaasa tokko (1) numa biratti tahe…….. eenyuun eenyutti dhukaasee?
Konkolaataa jawaar V8 gurraacha kan achi fagaattee jirtu sana keessatti Jawaar baqqalaa fi Hamzaa qabanii gaafa deeman. Hoggaasuma daqiiqaa 2 lama keessatti sababa qabamuu Jawaarffaa kan gubate poolisiin Oromiyaa Saajin Magarsaan akkana jedhe dubbate “yaa Oromoo silaa ati wal hin taatuu, yoo ati wal hin taane, kunoo an of keessaa baase” jedhee hoggaasuma morma jalatti qawwee of qabee ofii isaatiif of ajjeese.
Achii booda waraanni lamaanuu jechunis kan rippaabiliikaan gaardii fi liyyuu hayliin Oromiyaa adda facaatee wal gaareffate. Walitti dhukaasuuf moo waan rasaasani dhukeef? Yeroo taateen kun tahu jawaar baqqalaa fi Hamzaa fudhanii gara wajira ODP duranii deemaniiru.
Achii namni hedduun shoroorkaa keessa gale jechuun ni rifate. Boodarra itti gaafatamtoonni humna waraana lamanii gidduu seenun ija akka wal irra deefatan godhan. polisoonni Oromiyaa gara keenya goruun nu tasgabbeessuuf yaalan kana keessa Jawaar Mohammed miidhu jannee waan yaadoyneef wa’ee isaa irra dadeebine gaafanne liyyuu polisiin oromiyaas “Hin yaadinaa isa namni tokko mooraa kana hin baasuu asuma jira gar tokko hin deemu isin illee mee Abbaan ana jedhe dhufee issin haa tuquu” jechuu nu qabneessan gaafa jawween nagaa tahu baru tasgabbiin teenye………
Takalatti gaafa Rippaabiliikaan gaardiin dhufu wanta adeemsifamaa jiruuf furmata akka kennuuf itti bilbilamuus na OBSAA amman bilbila walitti hin bu’inaa jedhee nu sobe achuman achi tahe hafe. Obboloota isaa diina jalatti darbee galee rafe guyyaa Kan imimaan sobaa booyuu egalan isaaf shimalisis.
Egaa amma cubbuun eegalte kan taateen kun tahe gara guyyaa sa’aatii 5-6 local time. Hunda keenya jechuun Jawaar, Baqqalaa fi Hamzaa malee galama keessatti ol nu galchanii, achii comandar IBRAHIM namni jedhamu farsoo isaa dhugee quufee gara keenya dhufe namni kun comadaroota jawaarffaa fuudhanii deeman keessa tokko isaan nama lama turan lachuu Oromiyaa polisii dha.
Achii dhufe polisoonni Oromiyaa ofii ishii wal loluu eegalte hunda keessaa sajin #IYYAASUUTAMIRAT irratti xiyyeeffatan kan irra qaba kan itti fiiga mucaa lubbuu itti fidanii sodachisan garuu inni goota gurra hin laannef. Achii booda polisiin tokko “Situ gurbaa of nyaachisee sababa keetiin kun tahe ilma haadha…maal maal jedhen, sana booda comadartichis dhufee shuguxii itti baafatee morma isaa qabee of dura buusee deemeen.
Iddoo inni gesse hin beekne Kanaafuu kan huccuu of irraa baase sun hin duune kan of ajjesee Magarsaa jedhama. Booda irratti polisiin nu eegaa turan gariinis dabaree jijjiratan gariinis amala jijjiratan kophee keessan irra haada ykn Gamadii baasa mobile keessan lafa kaaya qabattoo ykn waraansillee baasa nun jedhan amma abdii kunne hanga duraa akka waan haala ilaalanii nu gad lakkisanii fakkeessa tura amma garu ajajni itti kename. yeroo kana sa’a 8 local time ni taha.
Amma hundi keenya hidhamuu fii hogantoonni keenyas nagaa tahuu barre garuu ijjoollee security illee fuudhanii deemna gara hayyoota keenya. Yoo kana sa’aatiinis deeme gara galgalaati. Booda irra hunda keenya hiriira nu galchanii GGAO keessaa gara waajira OPDO sanan gad nu baasan.
Gaafa achii geenye jennu jawar faa nu darsanii baasanii gara Sostanya 3nya maramiyaa iddoo jedhamutti deemaniru nutis poolisii federalaa TseraSheber jedhaman Kan malayoo ykn koofiyyaa diimaa kewataniin Dhiira 25 bakka tokkotti fii Dubartii tokko 1 patroliin nu fe’anii gara iddoodhuma Gash Baqqalaa faan jiran sana nu geessan.
Hidhaa dharaaf cubbuu
Abu Amira Hashim